Siyaasi Aad U Necbaan Jiray Diinta Islamka Iyo Muslimiinta Oo Islaamay ..[Akhriso]
Wednesday February 06, 2019 - 21:09:42 in Wararka
Siyaasi horay uga tirsanaa xisbiga midigta fog ee Geert Wilders oo kadhisan dalka Holland aadna u necbaa Islaamka ayaa isniintii aynu soo dhaafnay ku dhawaaqay in uu qaatay diinta Islaamka.
"Intii aan qorayay buugan, waxaan arkay waxyaabo aad u badan oo badalay fikirkii aan ka heystay diinta islaamka, taasi oo aan aaminsanahay in aysan wax xikmad ah ku jirin". Ayuu yiri Joram.
Warbaahinta maxaliga ee dalka Holand ayaa kusoo warranatay in siyaasigan uu ahaa mid aad u neceb dadka heysta diinta islaamka oo waxaa uu mar diinta Islaamka ku tilmaamay mid "been abuur ah".
Sidoo kale Qur'aanka Kareemka ayuu ninka soo Islaamay horay ugu tilmaamay mid "sun ah" waxaana aad loo xusuusta hadal uu horay u yiri oo ahaa in "dhibaatada ugu badan ee adduunka ka taagan ay tahay Islaamka".
Van Klaveren ayaa horay uga tirsanaa barlamaanka dalka Netherland sanadihi 2010-ka ilaa iyo 2014-ka
Sidoo kale Arnoud van Doorn oo isna horay uga tirsanaa isla xisbigii uu ka tirsanaa Jarom ayaa horay u qaatay diinta islaamka, waxaana uu Jarom ugu hambalyeeyay go'aanka uu qaatay.
Baaritaankan oo ay horay ay u sameesay hay'adda Pew Research Center ayaa muujinaya in marka la gaaro sannadka 2070-ka ay Muslimiinta ka badan doonta Krishtanka.